Maya, tani may ahayn jees jees ah iPhone 7. Waa Meizu Pro 6 | Wararka IPhone
Maya, tani may ahayn jees jees ah iPhone 7. Waa Meizu Pro 6
In qaybo badan oo ka mid ah iPhone 7-ka ay soo muuqdaan bisha Maarso waa wax aad inagula yaab leh. Ma muuqatay roon, daboolka dambe ee loo maleynayay iyo xitaa moduleka kamaradaha laba-geesoodka ah, laakiin wali waxaan lix bilood ka maqanahay soo bandhigida qalabka. Ugu yaraan maanta waxaan horey u xallinay su'aasha ah qaybta ugu dambeysa ee soo muuqaneysa, kiis aad ugu eg kan iPhone 6, laakiin leh kaliya xarig qalooca xagga sare iyo hoose. Maaha jees jees ka mid ah iPhone 7, haddii aan a kiiska dhabta ah ee Meizu Pro 6.
Mareykanka Madaxweyne kuxigeenka Meizu ee Iibka iyo Suuqgeynta ayaa shaaca ka qaaday shalay, Li Nan, ka dib markii blog-ka Shiinaha ay sheegteen in kiisku yahay kii jiilka soo socda ee iPhone-ka. Dhexdhexaadiyaha ayaa sheegay in sawirku si toos ah uga yimid Foxconn, laakiin in badan oo naga mid ah ayaa la yaabnay inaysan u ekaan naqshadda aan ku aragnay render in "xaday", had iyo jeer calaamadaha sheegashada, Nowhereelse.fr, oo ah dhexdhexaad u janjeera inuu ku saxsanaado waxa uu muujinayo.
Waa Meizu Pro 6, maahan iPhone 7
Nan ayaa daabacday sawirka hogaaminaya qoraalkan Twitter-ka Shiinaha, Weibo, halkaasoo astaanta MEIZU si cad loogu arkay iyo in badhamada mugga ay kujiraan dhanka midig. Badhannadani marwalba waxay kujireen dhanka bidix ee iphone kasta kamana muuqato inay wax iska badalayaan wakhti dhaw. Meizu Pro 6 wuxuu yeelan doonaa a naqshadeynta oo aad ugu eg iPhone 6 / 6s, oo leh geeso wareegsan. Nan ayaa sheegtay inay u dhigtay sawirka si looga fogaado daadadka faallooyinka uu sababi lahaa haddii iphone-ka cusub ee Apple-ka la sii deyn lahaa.
Haddii aysan jirin wax kadis ah, the iPhone 7 waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Sebtember. Sida laga soo xigtay soo saaraha qalabka iyo xanta, ma lahaan doonto deked headphone 3.5mm waxayna soo bandhigi doontaa laba ku hadla. Iyo waxa ugu xiisaha badan ayaa ah inay ku jiri karto Isku xiraha Smart, oo umuuqda mid ilama muuqato. Sida had iyo jeer, waxaan ka takhalusi doonaa shakiga bisha Sebtember.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Maya, tani may ahayn jees jees ah iPhone 7. Waa Meizu Pro 6
Taasi waa haddii ay taasi tahay iPhone 7 .. Way isku mid tahay, waxaan u baahan nahay naqshad dhammaystiran oo cusub oo aan ahayn kalluun dhexda ku xirxiran, waxaan rajaynayaa oo keliya in Apple ay hal-abuureyso oo ay naga tagayso iyadoo afkeennu furan yihiin, sida munaasabadaha kale .
Daaweynta Unbox waxaa lagu sameeyaa kiis iPhone 7 ah waxayna ku muujineysaa fiidiyoow
Apple TV 4 wuxuu isu diyaariyaa dhacdada Isniinta: Codsiga Dhacdooyinka Apple hadda waa la heli karaa